PowerPoint Recovery - Hel dhabarka laga badiyay bandhigyo PPT
Laba siyaabood inuu ka soo kabsado PowerPoint Files Si fudud
Si kasta oo ay u soo kaban aan PowerPoint?
Laba siyaabood oo loo sameyn kabashada PowerPoint
Video tutorial soo kabashada PowerPoint
1 hab kasta oo ay ku soo kabsadaan aan PowerPoint?
Waxaa la My computer xidho marka ay dhibaato iyo waxaan laga badiyay PowerPoint ah in aan ku qaatay 3 saac ka shaqeeya. Sidee ayaan u soo kabsado ha PowerPoint this?
PowerPoint ayaa noqday iyo aad u badan oo muhiim ah oo caan ah si ay hay'adaha, shirkadaha iyo waxbarashada farabadan oo ka mid ah ururada si ay u abuuraan qalabka tababarka, bandhigyo wax soo saarka, warbiximaha sannadlaha ah, iyo qaar badan oo. Waa arrin laga xumaado in uu si aad bandhigyo badiyay PPT si fiican loo qorsheeyay oo qiimo leh. Gaar ahaan marka bandhigyo PPT waa la muuqaalo weyn, sida animations, sawirada, warbaahinta ciyaaryahan files, faylasha codka, miisaska, waxaad tahay hadalka, muuqaalada aasaasiga ah, xiddigaha iyo boorar, jeer iyo wax kasta image, taas oo ay tamar ka badan ayuu idiin qaaday. Ka sokow, waxaad haystaan ​​waqti dheeraad ah ma mar kale in ay sameeyaan sida PowerPoint qiimo leh. Sidaas darteed, waxaa suurto gal ah si aad u soo kabsado PowerPoint lumay faylasha? Haa, dabcan, oo waxaa jira laba siyaabood oo dhab.
2 Laba siyaabood oo loo sameyn kabashada PowerPoint
Ka hor inta samayn kabashada PPT ah, waxaa jira hal wax oo aad u baahan tahay inaad ogaato. Bixinta in aad PowerPoint lumay, iyadoo lagu kaydinayo PowerPoint kale la magac la mid ah sida, aadan awoodin in aad hesho PowerPoint ka dib ku jira ee asalka ah ee heerka kasta, sababta oo ah run ahaantii ka kooban asalka horay overwritten by mid ka mid ah oo cusub oo aad ku kaydsan, oo waxa kaliya ee aad heli kartaa eesan ka dib.
Jidka 1 Ladnaansho PPT ka folder saxid
Marka aad hesho PowerPoint maqan, waxa ugu horeeya ee aad isku dayi kartaa si aad u hesho dib waa in ay baadhaan Folder saxid ee your computer. Raadi file size la mid ah sida aad PPT leh iyo isku day si aad u furto in PowerPoint in Chek haddii ay tahay mid aad raadinayso.
1. Riix ikhtiyaarka "Start" iyo dooro "baadh".
2. Guddi raadinta, ku qor magaca file (ama qayb ka mid ah hadii aadan si cad u xusuusan) sida * .TMP, ka dibna ku dhuftay on "baadh".
3. Ka dib baadhi ah, dooro kuwa files in ay leeyihiin baaxadda la mid ah sida aad PowerPoint, oo isku day inaad iyaga furo PowerPoint si aad u hubiso haddii faylka aad rabto in aad weli waa halkan. Ama waxaad iyaga isku dayi kartaa mid mid hadii uusan badan.
Jidka 2 Ladnaansho PPT la soo kabashada PowerPoint ah
Haddii jidkii hore waa dhammaadka dhintay, waxaad u tagi kartaa in ay sidan, si ay u isticmaalaan ah soo kabashada PPT . Haddii file PPT aad aan overwritten by files cusub, waa in lagu kaydiyaa meel ku wadid aad computer ee adag, kaliya ma aad arki karto iyo marin. Waxaad isku dayi kartaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac haddii aad isticmaalayso Mac OS X. Labada iyaga ka mid ah waa 100% ammaan ah, oo ay taageeraan dib u soo kabashada ee PowerPoint in version kasta, oo ay ku jiraan 2007, 2003, 2002, 2000 iyo 97, iyadoo aan loo eegayn haddii aad format, lumay ama u tirtiray sababtoo ah sababo kale oo ay ka mid yihiin disk geli karin ama la kharribtay, awood la'aan iyo jeermiska fayraska, iyo in ka badan.
Runtii shaqayn karaa? Soo qaado tijaabo ah oo si xor ah u iskaan aad badiyay files PowerPoint.
Step1 . Download iyo rakibi version saxda ah ee software PowerPoint soo kabashada on your computer. Waxaa Orod oo dooro meesha aad laga badiyay waxa ay u iskaan.
Step2 . Marka iskaanka ay ka badan tahay, oo aad ku eegaan karo iyo xaqiijin haddii kuwii doonayay files waxaa laga helaa. Waxaad isticmaali kartaa doorasho Filter si ay u dejiyaan nooca file ee jeegga fudud, ama si toos ah u baadhaan filename haddii aad xusuusataan.
Step3 . Hubi files bartilmaameedka iyo bilowdo soo kabsaday.
Fiiro gaar ah: Xusuusnow in aan mar kale ku kaydiso faylasha aad soo kabsaday oo uu meesha asalka. Waxaad ka heli kartaa xijaab kale ama isticmaal disk kale oo bannaanka ah, waayo, ammaan aawadiis. Ka sokow, soo kabashada Xogtan ayaa sidoo kale aad enpowers inuu ka soo kabsado files kale sida Text, Excel, Word, Archives iyo PDF oo dheeraad ah. iyo sidoo kale sawiro, audio iyo videos files.
3 Video tutorial soo kabashada PowerPoint
Sida loo Unformat NTFS Drive
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray PDF Files - Qaabka Document qaadan karo
Sidee si ay u gudbiyaan Android Data in macruufka 9
Qashinka Mavericks Recovery, ka Trash in Mavericks Ladnaansho Data
Dhib u Patriot Xporter Recovery
Sida loo soo ceshano tirtiray Pictures ka BlackBerry qalooca 8530/9360/9330
Sidee inuu ka soo kabsado Excel Files in Windows / Mac
> Resource > Ladnaansho > laba siyaabood inuu ka soo kabsado PowerPoint Files Si fudud